फुपुको बदला लिन भागरथीको ह,त्या ! आरोपीले दिए यस्तो बयान ! » बुद्ध भूमि नेपाल
काठमाडौं । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका–७ की १७ वर्षीया भागरथी भट्टको ब’ला त्का’रपछि ह,त्या आ’रोपमा एक जना प’क्रा उ परेका छन् । प्र’काउ पर्नेमा १७ वर्षीय दिनेश भट्ट छन् । उनले ह,त्या आफैँले गरेको स्वीकार गरि सकेको प्रहरीले बताएको छ । साबिति बयानका क्रममा दिनेशले आफूले फुपुको ब’दला लिन भागरथीको ह,त्या गरेको बताएका छन् ।
दिनेशको बयान उद्धृत गर्दै प्रहरी स्रोतले भन्यो– “भागरथीका बुबाले मेरी फुपी माथि नराम्रो गरेका थिए । त्यसैको बदला लिन सडकबाट ध’केलेर पछि घाँटी थि’चेर मा,रेको हुँ । तर ब’ला त्का’र गरेको होइन।” ह,त्यापछि आफैँले भागरथीको मोबाइलको ब्याट्री झिकेर फालेको समेत उनले बताएका छन् । सुरुमा आफूले भागरथीको किताब फा’लेको र त्यसपछि उनलाई नै ध’क्का दिएको उनले बताएको प्रहरी स्रोतले बतायो ।
स्थानीय सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालयको कक्षा–१२ मा अध्ययनरत भागरथी अघिल्लो २१ गते साँझसम्म विद्यालयबाट घर फर्केकी थिइनन् । उनी २२ गते बिहान कच्ची सडकको ५० मिटर भित्री क्षेत्रमा मृ,त अवस्थामा फे’ला परेकी थिइन् । मेडिकल रिपोर्टमा भने भागरथीको ब’ला त्का’रपछि ह,त्या भएको खुलेको प्रहरीले यसअघि बताउँदै आएको छ ।
प’क्रा उ परेका दिनेश भागरथीका आफन्त हुन्। घटना २१ गते दिउँसो २ः४० देखि २ बजेर ४७ मिनेटको दुरीमा भएको बताइएको छ। भागरथीको अनुसन्धानमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश प्रहरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीको विशेष टोली खटिएको थियो ।